Cunto: Isticmaalida Boostada si loo abuuro Wiki Articles
Michael Brown, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiil, ayaa sheegay in Wikipedia ama Wiki kaliya ay ka mid tahay boggaga internetka kaas oo ku faani karo in ay heystaan ​​maqaalo badan oo ku qoran mawduucyo kala duwan. Svenker Johansson, oo ah maamulaha jaamacadda ee Sweden, ayaa difaacay farsamooyinka abuurista malaayiin sheeko oo kali ah, isaga oo sheegay in uu sameeyey isticmaalka caqli-gal ah ee robot iyo qoryo iyo in ay oggolaadaan mas'uuliyiinta sare ka hor inta aan la isticmaalin wikipedia
Barnaamijka Johansson ee software wuxuu si guul leh u abuuray malaayiin maqaal ah oo Wikipedia ah, wuxuuna noqday mid ka mid ah tifaftirayaasha ugu caansan uguna tarjuma bogagga shabakada internetka. Hadda, macalimiintaan dabiiciga ah waxaa loo yaqaan 'Lsj'. Waxa uu abuuray Lsjbot, oo ah tifaftiraha Wikipedia oo is-qoraya kaas oo ka caawiyey Svenker in uu abuuro waxyaabo badan oo Wikipedia ah oo ku saabsan qaabka uu u yahay Swedish-ka. Ilaa hadda, Lsjbot waxay abuuri kartaa saddex malyan oo maqaalo ah oo kala duwan oo ku saabsan noocyo kala duwan oo Wikipedia ah waxayna ku fashilmeen in ka badan toban malyan oo shakhsi ah. Johansson ayaa sheegaysa in hawsha ugu weyni ay tahay in la abuuro maqaallo ku saabsan noocyada kala duwan ee xayawaanka iyo dhirta - site ray ban internacionalni. Waxaa jirey waqtiyo markii Wikipedia uu lahaa tiro yar, laakiin Johansson ayaa sheeganeysa in ay yihiin maalmo muhiim ah oo maanta ah waana inay qeyb ka noqotaa mashiinada Google iyo Wikipedia.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaddidyo aan ku sameyn karno qatarta..Dabcan, bots waa muhiim sababtoo ah waxay ka caawiyaan inay qabtaan shaqo badan, iyo sidoo kale qoraallo maqaalo kala duwan ee Wikipedia. Qaybta Ingiriisku waxay leedahay malaayiin maqaallo daabacan, oo qashinka loo isticmaalo si loo hagaajiyo kharribaadda. Meel kasta oo adduunka ah, waxay dayactiraan oo cusbooneysiiyaan walxaha qadiimka ah, soo-galinta wada-hadallada jira, beddelaya qaybaha maqaalada Wikipedia iyo ku darista waraaqaha saxda ee saxda ah ee dhibaatooyinka gacanta.
Goobaha ama robotu waxay marayaan habsocodka oggolaanshaha gaarka ah
Erik Moller, oo ah agaasime ku-xigeen iyo qayb ka mid ah Ururka Wikimedia Foundation, oo mas'uul ka ah kormeeridda bogga internetka, ayaa tusaaleyaal ku saabsan Cluebot. Waxa uu sheegay in siyaasad dhamaystiran ay xukuntay isticmaalka robots ama bots on Wikipedia. Waxa uu u sheegay Wakiilka Guardiola in dhammaan qalabyada aysan u qalmin inay ka shaqeeyaan buqshadahan weyn ee maadada ah sababtoo ah hantidooda kooban, qaababka, iyo ikhtiyaaraadka. Qeybaha badankoodu waxay marayaan nidaamka ansaxinta ee adag marka go'aaminta ay sameyso bini'aadmigu haddii shaqooyinka ay qabtaan ay yihiin kuwo macno leh ama aan ahayn. Dhibaatooyinka dhif ah waxay qabtaan shaqooyinka mashquulka ah ee aan loo baahneyn inay yihiin kuwo isla markiiba aan la ansaxin ama xidhin inta ay noolyihiin.
Moller ayaa sidoo kale qiray in xogta habaysan ee Wikipedia iyo mashaariicdeeda lagu hayo siyaabo kala duwan, taas oo ka caawisa inay wax walba sii wado. Farsamooyinka isticmaalka robotyada iyo dhererka si ay u sameeyaan maqaallo ayaa leh dhibaatooyinkooda, laakiin Johansson ayaa difaaciisa ku difaacay dhibco xoog leh. Wuxuu qeexayaa in Wikipedia ee ku qoran in ka badan 150 astaamo ah Sayidka The Rings, laakiin kaliya qaar ka mid ah Dagaalkii Vietnam. Macnaheedu waa, macallinka dugsiga tayada leh ayaa marka hore abuuray qoryaha beddelaya qorayaasha iyo tifaftirayaasha. Kadibna wuxuu ka hadlayaa Tolkien iyo ragga ragga ah. Waxay weli u muuqataa mid adag in qof kaliya, laakiin Johansson waxay isticmaashey qulqulo qaas ah oo loo yaqaan 'Wikipedia' si uu u guto waajibaadkiisa si wanaagsan.